Dalabka a-kassada ee ku aaddan caddeynta shuruudaha shaqada Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)
Haddii aadan lahayn aqoonsi elekteroonig ah waad soo degsan kartaa, waadna soo daabacan kartaa Warbixinta hawlaha.
Buuxi foomkan oo noogu soo dir boosta, cinwaanku wuxuu ku qoranyahay foomkan. Ka fikir inaad foomkan wakhti hore soo dirto si uu noo soo gaadho ugu dambeyn 14-ka bisha. Adigu waxaad xitaa u dhigi kartaa xafiiska kuugu dhow. Adiga maaha inaad foomkan ku soo dirto ii-mayl.
Warbixinta hawlaha (Soo degso foomka ee kumbuyuutarkaaga ku buuxi, inta soo hartayna gacanta ku buuxi, adigoo qalin biiro adeegsanaya) Pdf, 435 kB. (Pdf, 435 kB)
Warbixinta hawlaha (Daabaco foomka ee gacanta ku buuxi, adigoo qalin biiro adeegsanaya) Pdf, 435 kB. (Pdf, 435 kB)
Marka aad taageero ka hesho Xafiiska Shaqada iyo Qasnadda Caymiska labadaba (ka qaybqaadato wadashaqaynta la xoojiyay ee lala leeyahay Qasnadda Caymiska) ee aanad bogga intarnatka ku samayn karin wargelinta hawlahaaga waxaad isticmaali kartaa foomkan:
Wargelinta hawlaha ee loogu talogalay ka qaybqaadayaasha wadashaqaynta la xoojiyay ee lala leeyahay Qasnadda Caymiska (Soo dejiso foomkan oo intii suratagal ah ku buuxi kombiyuutarkaaga, inta harsan ku buuxi gacanta, isticmaal qalin biiroo) Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)
Wargelinta hawlaha ee loogu talogalay ka qaybqaadayaasha wadashaqaynta la xoojiyay ee lala leeyahay Qasnadda Caymiska (Daabaco foomkan oo ku buuxi gacanta, isticmaal qalin biiroo) Pdf, 78 kB. (Pdf, 78 kB)
Foom loogu tala galay isu ururinta oo ku aaddan caddeymaha Pdf, 464 kB. (Pdf, 464 kB)
Codsiga shaqo billaabidda cusub (isagoo foom lagu sameynayo) Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)
Codsiga dheereynta (isagoo foom lagu sameynayo) Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)
Wargelin ku saabsan isbeddel ku aaddan shaqo-bilaabid cusub qof ku shaqaaleysiinta Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)
Haddii aad buuxiso shuruudaha shaqada oona islamarkaana lagu siiyay taageerada dhaqdhaqaaqa
Xaaladdaas waxaad isticmaali kartaa foomkaan kaddib u dir Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] ee aad ka tirsan tahay:
Ka dalbashada Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] caddaynta shuruudaha shaqada (Foomka soo degso kaddib buuxi adigoo kombyuutarkaga adeegsanayo) Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)
Ka dalbashada Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] caddaynta shuruudaha shaqada (Foomka daabaco kaddib gacanta ku buuxi, isticmaal qalin) Pdf, 27 kB. (Pdf, 27 kB)
Warqada codsiga gunnada hawl-gabka ee gaark ah
Miyaad soo ahayd shaqaale dawladeed oo ka diiwaan gashantahay Trygghetsstiftelsen markaas xaaladaha qaarkood waxaad codsan kartaa gunno hawl-gab gaar ah. Waa inaad si wadajir ah aad la taliyahaaga Trygghetsstiftelsen aad kula heshiisay in aad codsato gunno hawl-gab. Codsigan waa inaad soo raacisa dukumentiyada iyo Xafiiska Shaqada qiimeynteeda dhanka xaaladaada suuqa shaqada. Foomka arrintan waxaad ka helaysaa halkan.
Warqada codsiga gunnada hawl-gabka ee gaark ah (Soo dejiso foobkan oo ku buuxi kombiyuutarkaaga) Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)
Warqada codsiga gunnada hawl-gabka ee gaark ah (Daabac foomkan oo ku buuxi gacanta, qalin biiroo) Pdf, 71 kB. (Pdf, 71 kB)